Company Profile - Pingxiang Baisheng Chemical fonosana
Pingxiang Baisheng Simika fonosana Co., Ltd naorina tamin'ny taona 2011 miaraka amin'ny renivohitra voasoratra RMB 11,88,000. Baisheng hita amin'ny Ceramic Industrial Base, mihazona ny faritra 30000m 2, renivohitr'i milaza ny RMB 5,000,000.The fahafahana isan-taona ry orinasa ity amin'ny tanimanga vokatra dia 10.000 taonina. Isika indrindra indrindra hiatrehana Industrial seramika sy ny nampipoaka.
Izahay dia miantehitra amin'ny ara-teknika fanohanan'ny Dalian Institute simika Physique, Akademia Sinoa Momba ny Siansa, China Petroleum Group Jilin Design Institute, Pingxiang University sy ny fikarohana siantifika fikambanana, nanorina telo famokarana sy ny fikarohana sehatra. Misy mpiasa 138, 58 tao amin'ny oniversite na ambaratonga ambony, ara-teknika sy pitantanana manokana, ireo, dia nisy olona ambony ara-teknika titlesin18. Baisheng maharitra koa ny mpikarama 10 indostrialy seramika amin'ny fampandrosoana, fitaovana hitondra fiovana goavana fikarohana sy ny fampandrosoana ho an'ny manam-pahaizana sy mpampianatra ny ara-teknika ny orinasa adviser.Baisheng no alalana 3 Patents, 15 jiro modely Patents, namoaka taratasy matihanina mihoatra ny 50 Articles; Nahazo 2 siansa sy ny teknolojia fandrosoan'ny mari-pankasitrahana, 3 siansa sy ny teknolojia bita fanombanana, nitarika 1 sehatra nasionaly tetikasa, 10-paritany momba ny siansa sy ny teknolojia tetikasa, dia nandray anjara tamin'ny rijan-1-pirenena fenitra "orinasa tanimanga baolina inert tanimanga baolina" (HG / T 3683.1-2000).
Baisheng manana ny feno tanjaky ny indostria tanimanga vokatra fampandrosoana, famolavolana, ny famokarana sy ny fametrahana ny rehetra ao anatin'ny iray fanompoana, izay afaka mamokatra orinasa tanimanga (mitafo fanitso fonosana, tanimanga baolina, perforated tanimanga baolina, tanimanga saddles, tanimanga biriky sy sakafo), vy, plastika tilikambo fonosana, molekiolan'ny sivana (3a, 4a, 5a, 13X andian-dahatsoratra), nampahavitrihana alumina. Nampipoaka ny tontolo iainana dia afaka mamokatra hafanana ambany catalytic setroka nampipoaka, amoniaka lo nampipoaka, Methanation catalyst.Ozone oxidation nampipoaka sy ny indostria simika hafa nampipoaka.
Baisheng no fitaovana manokana ho an'ny baolina nitotoana azy, fotaka fanadiovana, koronosy, paharitry sy sintering, sady nandroso harato fehikibo tonelina kiln.The sintering mari-pana dia afaka ny ho tahaka ny avo tahaka ny 1750 ℃ ​​sy ny instrumentation sarobidy ny RMB 7.000.000. dia nanorina ny R & D foibe manokana fikarohana sy fitsirihana manokana, amin'ny nomerika fampisehoana injeniera tanimanga compressive hery Mpamantatra, Flame photometer, elektronika poto-mandanjalanja, silicate zavatra simika mafy Analyzer, DHG Series Heating sy namaoka fatana, Fast fanafanana manohitra lafaoro lehibe, haingana grinder , simika harafesiny manohitra fitaovana fitiliana, elektronika fitsapana lafaoro lehibe, abrasion Mpamantatra sy ny fitaovana maoderina sy ny fikarohana mizaha toetra tanteraka methods.the ilaina ny fikarohana instrumentation dia mihoatra noho ny RMB 5,000,000.
Ny tsara no mifehy araka ny ISO9001, ny batches vokatra hentitra fitsapana ny Test foibe, fitsapana zavatra ahitana simika singa, habe fahadisoan-dàlana, ny bika aman'endriny takina, hanorotoro hery, ny rano hisakana ny fiasan'ireny, alkali fanoherana, Acid fanoherana, mafana taitra resistance.The R & D famatsiam-bola maherin'ny 600.000 isan-taona.
Ny orinasa dia ny fiaraha-miasa tambajotra mpikambana ao amin'ny vondrona Petroleum China, Nandritra izany fotoana izany isika no mahafeno fepetra mpamatsy ny CHEMCHINA sy China National Arintany Vondrona Corp sy ny indostria tanimanga orinasa voatonona ny fitantanan-draharaha dia ny ISO9001 department.we fivarotana sy ny vokatra mahazo vola ny mahafeno fepetra taratasy fanamarinana ny vokatra tanimanga Analysis center.our vokatra ho any an-tsena iraisam-pirenena, toa an'i Alemaina, Japana, Danemark, Rosia, Amerika, Iraq.annual varotra takatry RMB6,000,000.